Online Freelance Jobs - Myanmar Freelance Hub - Crowdsourcing Site
527 projects found.
Development Buildings Manager
Project ID 0462358
Budget 1,000,000 ~ 1,100,000 MMK
- စူပါမားကတ်တိုးချဲ့ရန် တည်နေရာသတ်မှတ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။ -စူပါမားကတ်များတိုးချဲ့ရန် မြေနေရာလွတ်များအတွက် မြေပိုင်ရှင်များနှင့်...
English (US) Sale & Marketing
Admin cum Account (Japanese Speaker for Yangon & Mandalay)
Project ID 8421673
Budget 450,000 ~ 500,000 MMK
လိုအပ်ချက်များမှာ - - Japanese Language (N2) Level ပြောဆိုနိုင်ရပါမည်။ - Accounting ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးပါမည်။ ** အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း...
Category: Accounting & Consulting
Logistics Staff (Japanese Speaker)
Project ID 7012946
Budget 300,000 ~ 350,000 MMK
လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ# - Logistic operation. -Arrangements for the Cross-Border land transport -Coordinates client’s schedule and documents -Issue of B/L -Support for Manager
Assistant Manager (Real Estate)
Project ID 2436950
- Interview prospective clients, accompany clients property site - Support Japanese managers. Requirement: - Japanese (Intermediate) ပြောနိုင်သူ - ဂျပန်တွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ - ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ...
Sales & Marketing (Japanese Speaker)
Project ID 9438106
Budget 250,000 ~ 450,000 MMK
- ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများအား Customer များထံသို့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊စာချုပ်ချုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ -...
Japanese Sale & Marketing
Technical articles content writer(Finish Until 28 July)
Project ID 1658324
We haveamedia/news website in3languages for tech startups in Myanmar: https://myanmartechpress.com (Japanese) https://mm.myanmartechpress.com (Myanmar) https://en.myanmartechpress.com (English) We are looking for professional content writer who can write technical Articles and news to upload the contents to those sites. Requirements and Responsibilities: - Writing new technical...
Content Writing Content Writing (Myan, Eng) Content Writing (Japanese) Content Writer
Project ID 8104269
Budget 250,000 ~ 350,000 MMK
-	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Sales & Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့်တော်သည်။ -	Sales & Marketing Field တွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၄)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ -	အသက်(၃၀)နှစ်မှ...
၁၅၀၀ ကျပ်တန်ဆင်းမ်ကဒ်ခေတ်ရဲ့ လူထုကြားက IT ရေစီး
Project ID 1458620
"၁၅၀၀ ကျပ်တန်ဆင်းမ်ကဒ်ခေတ်ရဲ့ လူထုကြားက IT ရေစီး" ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီ မြန်မာပြည်မှာ မိုဘိုင်းလ်ဆင်းမ်ကဒ်တွေကို...
Blog Writing Content Writing Content Writing (Myan, Eng)
Technical articles content writer(Finish Until4August)
Project ID 6401528
Content Writing Content Writing (Myan, Eng)